मुख्यसचिव बन्न दौडधुप सुरु भयो, कसको पल्ला बारी ? « Himal Post | Online News Revolution
मुख्यसचिव बन्न दौडधुप सुरु भयो, कसको पल्ला बारी ?
प्रकाशित मिति : २०७४, ८ आश्विन ०६:५२
यस्तै, कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री भएका बेला निधिले रेग्मीलाई अर्थबाट गृहमा ल्याएका थिए भने अहिले माओवादी नेता जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुँदा पनि गृहसचिव उनै छन् । समकालीनहरू उनलाई मन्त्रीको ‘एसम्यान’ भनेर टिप्पणी गर्छन् । ‘मन्त्रीहरूले जस्तोसुकै खराब काम गराउन दबाब दिए पनि त्यसको प्रतिरोध गर्दैनन् बरु सहर्ष स्विकार्छन्’, उनका एक समकालीनले अन्नपूर्णसँग भने । यी सबैका बाबजुद आगामी मुख्यसचिवको दौडमा धेरैले रेग्मीलाई नै अघि बढेको देखेका छन् ।
सचिव अधिकारीलाई सरकारले केही दिनअघि मात्रै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरेको थियो । अधिकारीलाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरिएको तीन दिनभित्रै फेरि निर्वाचन आयोगबाट तानेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेर ‘पेन्डुलम’ पार्ने काम गरिएको थियो । ‘यही सरकारले पेन्डुलम बनाएका अधिकारीलाई यही सरकारबाट मुख्यसचिव बनाउने कुरै छैन त्यसैले उनको सम्भावना निकै न्यून छ’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने । अधिकारी मुख्यसचिव नभए पनि उनी ०७५ साल ६ साउनसम्म सचिवका रूपमा कार्यरत रहनेछन् ।
मुख्यसचिवका मुख्य जिम्मेवारी
मुख्यसचिव नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हो र सोही हैसियतमा निजले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने गर्छ । सरकारका हरेक गतिविधिमा मुख्यसचिवले निर्णायक भूमिकासमेत खेल्न सक्छ । मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीको सुपरिवेक्षण तथा निर्देशनको अधीनमा रही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा कार्यालयको कार्यसम्पादन गराउने गर्छन् भने सरकारका सचिव तथा अन्य विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको सुपरिवेक्षकको हैसियतले निजहरूले सम्पादन गरेका कार्यको सुपरिवेक्षण गर्ने तथा सचिवले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यमा आवश्यक निर्देशन दिने काम मुख्यसचिवले गर्छन् । निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद भएकाले मुख्यसचिव पद सबैका लागि आकर्षक पद हो ।
यो समाचार अन्नपुर्ण दैनिकमा छ